Ithegi: uguqulo | Martech Zone
Iarhente yam isebenza ukuncedisa inkampani enxulumene nokunakekelwa kwezempilo ngeelwimi ezimbini ukwakha indawo yabo, ukuyilungiselela ukukhangela, kunye nokuphuhlisa unxibelelwano lokuthengisa kubathengi babo. Ngelixa babenendawo entle yeWordPress, abantu abayakhayo baxhomekeke kutoliko lomatshini kwiindwendwe ezazithetha iSpanish. Kukho imiceli mngeni emithathu ngoguqulelo lomatshini wesiza, nangona: uLwimi - Uguqulelo lomatshini waseSpain khange luthathele ingqalelo ulwimi lwaseMexico lwabatyeleli. Isigama
Ulenza njani iTshaneli yoThengiso lwakho loThengiso lweNkcitho ukuze uzuze kwi-Ecommerce Boom
I-ecommerce ibe yinto ekhulayo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Kwaye ngobhubhane, abantu abaninzi bathenga kwi-Intanethi kunanini na ngaphambili. I-ecommerce ibonelela ngendlela efanelekileyo yokufikelela kubalo kwihlabathi liphela ukusuka ngasemva kwikhompyuter. Apha ngezantsi, siza kujonga ukubaluleka kweenkonzo zokuguqula ukuthengisa kunye nendlela yokuzisebenzisa ukukhulisa intengiso yakho ye-eCommerce. Kutheni kuhlawula ukuGuqulela ukuThengisa oBuchule kwiQhinga lakho loRhwebo laMazwe ngaMazwe Usebenzisa inkonzo yokuguqula ukuthengisa
Kwixesha elidlulileyo, bendithandabuza ukusebenzisa ukuguqulelwa komatshini kwindawo yam. Ndingathanda ukuba nabaguquleli kwihlabathi liphela bancedise ekuguquleleni indawo yam eya kubaphulaphuli abahlukeneyo, kodwa akukho ndlela ndinokuphinda ndizibuyise ezo ndleko. Nditshilo, ndiyabona ukuba umxholo wam kwindawo yam kwabelwana ngayo kwilizwe liphela kancinci-kwaye abantu abaninzi basebenzisa iToliki kaGoogle ukufunda umxholo wam kulwimi lwabo lweenkobe. Oko